November 2, 2013 – democracy for burma
Burma’s ethnic conference in Laiza extended
Representatives of Burma’s ethnic armed groups meeting in the Kachin Independence Organization’s (KIO) de facto capital Laiza extended their conference to Saturday, Japan’s Kyodo News Agency has reported. The conference which began last Wednesday is being held in order to facilitateaunified response to the government’s plans foranationwide ceasefire.
“We have all generally agreed on the framework but we will meet again to finalize and sign it tomorrow,” Chin academic Salai Lian Sakhong explained to Kyodo. Kyodo is one of the few foreign news agencies to send its staff to cover the conference.
The conference which involves the representatives of 16 of Burma’s armed ethnic groups, is the first major conference of its kind to be held in rebel territory since the Karen National Union (KNU) hosted similar unity conferences in Manerplaw in the early 1990’s. Apart from the KIO the Laiza conference includes representatives of the KNU, the New Mon State Party (NMSP), the Chin National Front (CNF), the Shan State Army South (RCSS), the Shan State Army North, Ta’ang National Liberation Army (TNLA), the Karenni National Progressive Party (KNPP), Lahu Democratic Union, Arakan National Council, Democratic Karen Benevolent Army (DKBA Na Kham Mwe faction), Pao National Liberation Organization (PNLO), and the Wa National Organization (WNO). The WNO is quite small and not to be confused with the much larger United Wa State Army who did not attend.
Although the KNU for many years championedaunited front amongst Burma’s various ethnic rebel groups, the KNU’s current leadership under Mutu Say Poe, appears far less interested in such things these days. Informed observers tell the Kachin News Group that the KNU’s current position on the national ceasefire is at odds with the stance of the United Nationalities Federal Council,acoalition of 11 armed groups which includes both the KNU and the KIO, that is far more skeptical of the government’s ceasefire related plans.
Laiza Ethnic Armed Conference Statement Credit: KNG —
On November 2, 2013 November 2, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Laiza Ethnic Armed Conference Statement
Credit: KNG —
CORAL ARAKAN NEWS: ပေါက်တောမြို့နယ် ဆင်အိုင်ကျေးရွာက ရခိုင်အမျိုးသမီး သုံးဦးကိုကုလားများတိုက်ခိုက် တစ်ဦးသေ၊ တစ်ဦးဒဏ်ရာရ။
On November 2, 2013 November 4, 2013 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ပေါက်တောမြို့နယ် ဆင်အိုင်ကျေးရွာက ရခိုင်အမျိုးသမီး သုံးဦးကိုကုလားများတိုက်ခိုက် တစ်ဦးသေ၊ တစ်ဦးဒဏ်ရာရ။
၂ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၃။ Coral Arakan News
ယနေ့ညနေ ၆နာရီခန့်က ပေါက်တောမြို့နယ် ဆင်အိုင်ကျေးရွာမှ ရခိုင်အမျိုးသမီးသု့းဦးငါးရှာသွားစဉ် အနီးရှိ ငှက်ချောင်းကျေးရွာမှ ကုလာများရောက်လာပြီးအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်သဖြင့် တစ်ဦးသေဆုံးပြီး တစ်ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်သဖြင့် စစ်တွေဆေးရုံသို့ယူလာရကြောင်းသိရသည်။
လှံထိုးဒဏ်ရာဖြင့်သေဆု့းသူမှ မလှခင် (၃၀နှစ်)ဖြစ်ပြီး ဒဏ်ရာရသူမှာ မမေသန်းခင် (၁၈နှစ်)ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ဤဖြစ်စဉ်မဖြစ်မီ ညနေ သုံးနာရီခန့်က ဆင်တမော်ကုလားဒုက္ခသည်စခန်းမှ ကုလားများသည် ဆင်တမော်ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းပိုင်နေရာများသို့ထင်းရှာရန်လာသောကုလားများကို ရွာရှိလူများက ထင်းမခုတ်ရန် တားသောအခါ ကုလားများက အုပ်စုလိုက်ဝိုင်းလာကြသည်။ လုံခြုံရေးများက လှမ်းတားသဖြင့် ကုလားတစ်ယောက်ဒဏ်ရာရသွားသည်ဟုသိရသည်။
ဒဏ်ရာရသောကုလားအတွက် ကုလားအားပေး NGO ဖြစ်သည့် ICRC မှ အမြန်ဘုတ်ဖြင့်သယ်ယူပေးပြီး ဆင်အိုင်ရွာမှ ဒဏ်ရာရသော တိုင်းရင်းသားအမျိုးသမီးငယ်အတွက်မူ မည်သို့မှ စီစဉ်ပေးခြင်းမရှိဟုသိရသည်။
ဆင်တမော် ငှက်ချောင်းကုလာရွာများသည် ပဋိပက္ခဖြစ်သောအခြားနေရာမှ ကုလားများပါနေထိုင်လာကြသဖြင့် လူဦးရေအဆမတန်များပြားလာပြီး အနီးအနားရှိ ရခိုင်များအတွက် လုံခြုံရေးအားနဲကာ သက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်များပင်မလုပ်နိုင်ဖြစ်နေကြရသည်။
ကုလားများသည် OIC မြန်မာနိုင်ငံသို့လာမည်အချိန်နှင့်တိုက်ဆိုင်စွာ ပြသနာလုပ်နေကြာင်း ဒေသခံများက သုံးသပ်ပြောဆိုနေကြသည်။
မဟာဗျူဟာပုစ္ဆာများနှင့် စာရေးသူစဉ်းစားမိသည်များ – ကျော်ဝင်း
NOTE KYAW WIN 31.OCTOBER 2013
သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်များတွင် ခပ်စိပ်စိပ် တွေ့လာရသော၊ အရေးအသားတွေနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိတ်ဆွေတစ်ယောက်၏ မှတ်ချက် ဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူဘာမှ ပြန်မဖြေခဲ့ပါ။ သူ့စကား အသုံးအနှုန်းတိကျပုံ ကိုတော့ သဘောကျသွားသည်။ အထူးသဖြင့် “ခုတစ်လော” ဆိုသည်နှင့် “ပြန်”ဆိုသော ကြိယာဝိသေသနများ …။ ဟုတ်သည်ကော …။ စာရေးသူအနေနှင့် ဝေဖန်ရေး အမည်ခံ အပုပ်ချပွဲများနှင့် ကြုံရသည်မှာ တစ်ကြိမ်မှ မကတော့ဘဲ …။
ပြောရလျှင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ အကြိုကာလက တစ်ကြိမ်။ “ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ဖို့ စဉ်းစားသင့်တယ်” ဆိုသော စာရေးသူအမြင်ကို ဝိုင်းတွယ်ကြသည်။ အခုလည်း “အခြေခံဥပဒေ အသစ်ရေးတာထက်၊ ပြင်ရေးက လက်တွေ့ကျမယ်၊ တပ်မတော်ရဲ့ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်မှုကို အဆောတလျင် မကိုင်သင့်” ဆိုသော သဘောထားများကို ခပ်ပြင်းပြင်း သမနေကြသည်။ ရှိစေ …။ စာရေးသူ အနေနှင့်တော့ အရေထူနေပါပြီ။ ပျင်းတောင်ပျင်းသေးတယ်ပေါ့။
စာရေးသူအပေါ် ဆွမ်းကြီးလောင်းကြသူ များကို ယေဘုယျအုပ်စု နှစ်ခုခွဲကြည့်ပါသည်။ ပထမအုပ်စုမှာ “ခါတော်မီ သူရဲကောင်းများ”။ “မူ” သဘော ဟုတ်ဟုတ်ညားညားမပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆဲရေးတိုင်းထွာမှု သက်သက် ဖြစ်၍ စာရေးသူဘက်မှ တုံ့ပြန်စရာမလိုဟု ခံယူထားသည်။ ဒုတိယအုပ်စု ကတော့ ပိုအရေးကြီးသည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှု မကင်းသည့်တိုင် အိုင်ဒီအိုလိုဂျီ အခံများပါသည်။ သူတို့က စာရေးသူ၏ မဟာဗျူဟာအမြင်များ ကို ချေဖျက်ဖို့ ကြိုးစားကြသည့် သဘော ရှိသည်။
တစ်ခါက စာရေးသူ၏ မိတ်ဟောင်းဆွေဟောင်း (ဆိုကြပါစို့) ရဲဘော်ဟောင်းတွေ ဖြစ်ပါသည်။ “အုပ်စုအစွဲ” (Group Psychology) ဖြင့် “သစ္စာဖောက်သုတ်သင်ရေး” လုပ်ကြသည်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ မည်သို့ပင်ရှိစေ၊ မဟာဗျူဟာ သဘောဆောင်၍ စာရေးသူဘက်က တစ်စုံတစ်ရာ ပြန်ပြောဖို့ လိုမည်ထင်သည်။ သူတို့အတွက်ကား မဟုတ်။ စာဖတ်သူများအတွက် ဖြစ်သည်။
စာရေးသူ စဉ်းစားမိသမျှ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်သော မဟာဗျူဟာ ပုစ္ဆာငါးရပ်ကို ဦးစွာဖော်ပြပါမည်။
အဆိုပါ ပုစ္ဆာငါးရပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး စာရေးသူ၏ သဘောထား (ပို၍ တိတိကျကျ ဆိုရလျှင် “အမြင်အရွေ့”) ကို ဆက်လက်ဖော်ပြသွားပါမည်။
၁။ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲလော၊ ဥပဒေတွင်း နိုင်ငံရေးလော …။ Continue reading “မဟာဗျူဟာပုစ္ဆာများနှင့် စာရေးသူစဉ်းစားမိသည်များ – ကျော်ဝင်း” →
U WIRA THU : “ဦးဝီရသူထံ-အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ လာရောက်အင်တာဗျူး”-Internews သတင်းထောက် Mr.DARIN BIELECK ဖြစ်သည်။
On November 2, 2013 November 2, 2013 By Burma Myanmar newsIn UncategorizedLeaveacomment
2.11.2013 ညနေ 3:00 နာရီ၊ ဓမ္မသဟာယကျောင်းမှာ လက်ခံတွေ့ဆုံဖြေကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လာရောက်မေးလျှောက်သူမှာ USA ဝက်စ်ကွန်စီပြည်နယ် မဒီဆင်မြို့မှ Internews သတင်းထောက် Mr.DARIN BIELECK ဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းပြည်ပ အွန်လိုင်း-မီဒီယာများနှင့်ပတ်သက်သည့် အမြင်များကို မေးမြန်းသွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
FB-ကို အကျဉ်းကျနေစဉ်ကတည်းက စိတ်ဝင်စားခဲ့တာပါ။ လွတ်မြောက်လာတဲ့အခါ သင်္ကန်းပြန်မဝတ်သေးခင် မှာပဲ Wira Thu အကောင့်ကို ဖွင့်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
မူလက-ထောင်ထဲမှ ကဗျာများ စာများတင်ရုံ၊ နိုင်ငံရေးတရားပွဲများ၊ လှုပ်ရှားမှုများကို တင်ရုံလောက်သာ ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါ။
သမ္မတထောက်ခံပွဲနှင့် ရိုဟဂျာင်္ရှုတ်ချပွဲကို အကြောင်းပြုပြီး ဋ္ဌေးလွင် ခေါင်းဆောင်သည့် မူဆလင်များ အကြမ်း ပတမ်း တိုက်ခိုက်လာချိန်မှစပြီး မူဆလင်နှင့် ပတ်သက်သမျှတွေ ရွေးတင်ဖြစ်သွားတာပါ။
ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ကမ္ဘာက ကရုဏာသက်နေတဲ့ လူနည်းစုတွေဟာ မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ် ဘယ်လို သဘောထားကြတယ်။ ဘယ်လို ပြုမူဆက်ဆံကြတယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာကြီးသိစေချင်လို့ပါ။
မုဒိမ်းမှုတွေ ဒီလောက်တင်နေတာတောင် မူဆလင်အကြီးအကဲတွေက မူဆလင်ဘာသာဝင်တွေကို ပြောဆို ဆုံးမ တားမြစ်တာမျိုး မရှိကြပါဘူး။ ဒီက တိုက်တွန်းတာတောင် မတားမြစ်ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့် မူဆလင်တွေဟာ မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမလို သဘောမျိုး သက်ရောက်နေကြတာပါ။
ဦးဇင်းတို့ဘက်မှာတော့ မိတ္ထီလာနောက်ပိုင်း၊ ပဲခူးနောက်ပိုင်းမှစပြီး သံဃာ့အစည်းအဝေးတွေ အကြိမ်ကြိမ် ကျင်းပပြီး ဥပဒေမဲ့ မတုန့်ပြန်မိအောင် မိမိရပ်ရွာ တပည့်ဒကာ/မများကို ဆုံးမဖို့ အချင်းချင်း တိုက်တွန်းခဲ့ကြလို့ အဓိကရုဏ်းဖြစ်နိုင်လောက်အောင် အကြမ်းဖက်ခံရပေမယ့် အဓိကရုဏ်းတွေ မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါဘူး။ Continue reading “U WIRA THU : “ဦးဝီရသူထံ-အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ လာရောက်အင်တာဗျူး”-Internews သတင်းထောက် Mr.DARIN BIELECK ဖြစ်သည်။” →
မြိတ်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဦးစီး၍ စူပါမားကတ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဘဏ်များ၊ ဟိုတယ်နှင့် တည်းခိုခန်းများ၊ ရုပ်ရှင်ရုံမှ ၀န်ထမ်းများ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအား လုံခြုံရေး အသိပညာပေး သင်တန်း ပို့ချမှုအား၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့ နံနက် (၈) နာရီမှ (၁၂) နာရီ အချိန်ထိ မြိတ်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ပြုလုပ်သည်။ သင်တန်းဖွင့်ပွဲတွင် မြိတ်ခရိုင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ဒုတိယရဲမှူးကြီး ရွှေညာမောင် က သင်တန်းဖွင့် အမှာစကား ပြောကြားပြီးနောက် လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ အကြောင်းအား ပါဝါပွိုင့်ဖြင့် ရှင်းလင်း ပို့ချသည်။
ထိုနောက် မြို့နယ်လ၀က ဦးစီးမှူး ဦးနေလင်းမှ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ် ၊ ပတ်စပို့နှင့် ဗီဇာများ စစ်ဆေးနည်း ကိုလည်းကောင်း၊ ခရိုင်မီးသတ် ဦးစီးဌာနမှူး ဦးဇော်မင်းမှ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များ အကြောင်းကို လည်းကောင်း၊ အမှတ်(၉၁၈) စစ်မြေပြင် အင်ဂျင်နီယာ တပ်ရင်းမှ ဗိုလ်ကြီး စန်းကိုကိုက အဖျက်သမားများ ပြုလုပ်တတ်သည့် မိုင်းများ အကြောင်း သိကောင်းစရာ တို့ကို လည်းကောင်း ရှင်းလင်းပို့ချခဲ့သည်။ ပြီးနောက် မြိတ်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးရှေ့ ကွင်းပြင်တွင် မိုင်း သို့မဟုတ် မသင်္ကာစရာ ပစ္စည်းများ တွေ့ရှိပါက လုပ်ဆောင် ရမည့် နည်းလမ်းများ အကြောင်းကို ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး ရွှေညာမောင်၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူး သန်းဦး၊ စစ်မြေပြင် အင်ဂျင်နီယာ တပ်ရင်းမှ တပ်ကြပ်ကြီး ဇော်နိုင်တို့က လက်တွေ့ သရုပ်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါ သင်တန်းသို့ မြိတ်မြို့ရှိ စူပါမားကတ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဘဏ်များ၊ ဟိုတယ်နှင့် တည်းခိုခန်းများ၊ ရုပ်ရှင်ရုံမှ ၀န်ထမ်းများ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ စုစုပေါင်း (၁၀၀) ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
RAKHINE STATE :NGO, INGO (သို့မဟုတ်) မထိမ်းတတ်ရင် အဆိပ်ပင်
NGO, INGO (သို့မဟုတ်) မထိမ်းတတ်ရင် အဆိပ်ပင် ————————— အသွင်ကူးပြောင်းကာလမှာ အခြေခံအကျဆုံး အချက်က (၃)ချက်ရှိတယ်။ (၁)လူထုရဲ့ အသိပညာ ရေချိန် (၂) တန်းတူမှုကို စစ်ဆေးနိုင်မှု ( Check and balance) (၃) လူထုအခြေပြု လူမှု အဖွဲ့အစည်း ( Civil Society ) ဒီသုံးခုနဲ့ ထိန်းညှိသွားရတယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံရေးဟာ စစ်အာရှင်စနစ်ကနေ ဒီမိုကရေစီကို ပြောင်းလဲလာတဲ့ အထဲမှာ ဒီသုံးခုနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိနေပြီးလား။ အဓိက ကျနော်က ရခိုင်မို့ ရခိုင်ဘက်ကို ကြည့်ရင် မကိုက်ညီဘူးလို့ လုံးဝ ပြောရဲပါတယ်။ အကြောင်းက ဒီမိုကရေစီလို့ ပြောနေကြပေမယ့် ဒီမိုကရေစီစနစ်အောက်မှာ ဒရွတ်တိုက် ဆွဲခေါ်ခံနေရတယ်။ တန်းတူမှုကို ပြည်ဆန်းစစ်ဖို့လိုသလို၊ လူထုအသိပညာကလည်း အောက်ဆုံးကို ရောက်နေတယ်။ ဒီကြားထဲ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အရေးအခင်း မဖြစ်ခင်ကတည်းက ခြေရှုပ်နေခဲ့တဲ့ Civil Society က ပိုဆိုးရွားလာတယ်။ ဒေသခံတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို သူတို့ ဖျက်ဆီးနေတယ်။ အဓိက ပြသာနာက ဒေသခံ ရခိုင်တွေကို ငဲ့မကွက်ဘဲ လူ့အခွင့်အရေးကို ဘန်ပြကာ ဘင်္ဂလီတို့အပေါ် အလွန်အကျွံထောက်ပံ့မှု၊ အလုပ်ခန့်ရာတွင် ဘင်္ဂလီတို့ကို အဓိက ဦးစားပေး ခန့်အပ်မှုတို့ အပါအ၀င် ဒေသခံတို့အပေါ် မထီမဲ့မြင်ဖြစ်လာသည်ဟု ခံစားလာရတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတိုင်းခင်က ရခိုင်ဒေသတွင် လူထုအခြေပြု လူမှု အဖွဲ့အစည်း ( Civil Society ) မှာ အယင်းက နည်းပါးခဲ့တယ်။ အဖွဲ့အစည်းဆိုသည့်ထက် အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ် တစ်ခုတည်းဖြင့် ဒေသတွင်းလိုအပ်ချက်ကို ကူးညီခဲ့သည် လူမှုအစုအဖွဲ့လောက်သာရှိခဲ့တယ်။ အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ရုံးခန်းကနားဖွင့်ပြီး တည်ထောင်မှုများ မရှိသလောက် ရှားပါးခဲ့တယ်။ Civil Society Ognization (CSO) ၊ Non-governmental organization(NGO), International nongovernmental organization (INGO) တို့ အဓိက ပြည်ပက လာရောက် လုပ်ကိုင်ကြတယ်။ ဒေသတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် NGO, INGO တွေ၏ အခန်းကဏ္ဍက လိုအပ်သည်မှန်သော်လည်း NGO, INGO တွေက Business အသွင်ဆောင်လာတာကို တွေ့ရတယ်။ Civil Society တနည်း Volunteer ဆိုပြီး လစာအများဆုံးရနေသည် ဌာနလည်းဖြစ်နေတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် စစ်တွေမြို့ထဲတွင် အိမ်ဈေးနှုန်းများကို မတရားပေးခြင်းများရှိနေကို ကြည့်ရင့် သိနိုင်တယ်။ ဒေသခံ လူလတ်တန်းစားများက အိမ်ငှါးဘ၀ဖြင့် လုပ်ကိုင်နေကြသော ပုံမှန်းဈေးနှုန်းထက် အဆပေါင်းများစွာပေးပြီး ဒေသခံတစ်နိုင်တစ်ပိုင် စီးပွါးရေးကို ထိခိုက်မှုများပင် တွေ့နေရတယ်။ ဘယ် NGO, INGO ပင် ဖြစ်ဖြစ် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကို လာလုပ်သည်ဆိုလျှင် ဒေသခံတို့၏ အကျိုးစီးပွါးကို မထိခိုက်စေရပါ။ ဥပမာအားဖြင့် ပုံမှန်အိမ်တစ်လုံးလျှင် ငှါးဈေး (၁)သိန်းဆိုလျှင် NGO, INGO တွေက (၁၀)သိန်း၊ သိန်း (၂၀) လောက်ပေးပြီး အိမ်ငှါးဈေးတွေကို ဖျက်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ ဒီအခါ အိမ်ရှင်တို့က လစာနည်းသော ဒေသခံ လူလတ်တန်းစား အိမ်ငှါးများကို မငှါးတော့ဘဲ လစာများများပေးသော NGO, INGO များကို အဓိက ငှါးပေးလိုကကြတယ်။ ဒါကြောင့် ဒေသခံ လူထုအတွက် NGO, INGO သည် အကောင်းထက် အဆိုးဘက်ကို ပိုဦးတည်းသွားတယ်။ နောက်တစ်ချက်က NGO, INGO ကို လာလုပ်သူတွေက အနောက်နိုင်ငံက မိုးကျရွှေကိုယ်တွေ ဖြစ်နေတယ်။ ဒီဒေသမှာ ဒေသနဲ့ လိုက်လျောညီထွေမဟုတ်ဘဲ အဆင့်မြင့်အိမ်များကို ငှါးသုံးခြင်း၊ ဇိမ့်ခံကားများစီးခြင်း၊ လစာကောင်းကောင်း ရခြင်းတို့ကြောင်း နဂိုကတည်းက ဆင်းရဲသားများကြားတွင် မျက်မုန်းကျိုးစရာဖြစ်နေတယ်။ ရခိုင်မှာဆိုရင် NGO, INGO ပေါင်း (၁၅)ဖွဲ့ရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။ အဲဒီ (၁၅)ဖွဲ့က ရခိုင်လူထုနဲ့ ထိတွေ့တာ အများဆုံးရှိရင် (၃)ဖွဲ့ထက်တောင် ပိုမှာမဟုတ်ဘူး။ အကုန်လုံးက ဘင်္ဂလီတွေကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် တစ်မျိုး၊ လျှို့ဝှက် တစ်မျိုး ထောက်ပံ့တာကို မြင်နေရတယ်။ ဒါကြောင်း အစိုးရအနေနဲ့ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးမှာ NGO, INGO က အရေးကြီးတာ မှန်ပေမယ့် ဒေသခံများ သိအောင် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ကိုယ်တွယ်ဖို့နှင့် ဒေသခံများယုံကြည်မှုရအောင် လုပ်ပေးသင့်တယ်။ တစ်ချို့အရာများကို ဒေသခံများနှင့် ညှိုနှိုင်းကာ ဥပဒေတစ်ရပ်လောက် ပြဌာန်းသင့်သည်ဟု မြင်မိတယ်။ ဝေဟင်အောင် ၂၉၊ ၁၀၊ ၂၀၁၃
Ayeyarwaddy River Depanded Community Strategic Environmental Assessment Project Meeting (Pagan Gold Garden Hotel)
Ayeyarwaddy River Depanded Community Strategic Environmental Assessment Project
Meeting (Pagan Gold Garden Hotel)
ABSDF -Turns 25th Years-၂၅နှစ်ပြည့် ငွေ၇တု အခမ်းအနား (လိုင်ဇာ)
ko moe ABSDF ၂၅နှစ်ပြည့် ငွေ၇တု အခမ်းအနား (လိုင်ဇာ)